Mandrindra ny asa ao an-trano sy ny fitaizana
Iray amin’ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana manoloana ny fihanaky ny valan’aretina COVID-19 ny fijanonana ao an-trano.
Manampy ny ankizy ho tia sakafo
Matetika tsy resaka sakafo loatra no mahatonga ny ankizy tsy hazoto homana fa ny fomba fampisakafoanana azy. Hianaro ato anatin’ity lahatsoratra ity ny tokony hatao.
TV, tablette…adin’ny firy isan’andro ho an’ny ankizy?
Mahavariana sy mahaliana ny ankizy ny “ecrans”. Tsy tsara anefa izany indrindra ho an’ny latsaky ny 3 taona noho ireo voka-dratsy maro entiny.
Zaza hidiran’ny rivotra ...Ireo tsara ho fantatra rehetra
Diso ny fiheverana fa ny akanjo hanaovana, na ny toetry ny andro no mety mahatonga ny zaza hidiran'ny rivotra.
Vaky boky : Lafatra ho an'ny ankizy
Vavahady iray mampitombo ny fahalalahan'ny ankizy vetivety, indrindra amin’izao fotoana tsy ahafahany mianatra izao ny famakiana boky.
Manampy ny zaza harani-tsaina
Singa iray lehibe kendrena amin’ny fanabeazana ny zaza ny fampivelarana azy amin’ny lafiny ara-tsaina. Rehefa mianatra ny zaza dia tiantsika ray aman-dreny ny hahatonga azy ho zaza mahay, mahataka-javatra, marani-tsaina.
Gilasy amin'ny rononon-dreny ... mampitony ny nify mitsiry
Isan’ny mahasorena ny zaza ny fotoana hitsirian’ny nifiny. Na ny Ray aman-dreny ary misy fotoana lasa miferon'aina, mitebiteby ihany koa. Manomboka eo amin’ny faha-enim-bolana hatramin’ny faha-folo volany eo ho eo matetika no mifoha nify voalohany ny zaza.
ny fiarahana misakafo, ny fifanolorana fanomezana, ny fiarahana amin’ny ankapobeny. Raha mbola tsy afaka manao ireny “arbre de noel” any am-piangonana ny ankizy dia lalao afaka ataony tsara ao an-trano ireto entina amintsika ireto.
Mijery horontsary miaraka
Atombohy amin’ny fijerevana horonantsary iray manodidina ny Noely miaraka amin’ny ankizy ny tontolo andro iarahana. Tsara raha ilay vao avy mifoha amin’ny maraina mbola tsy miala eo am-pandriana iny no mijery azy raha ohatra ka nikasa ny tsy hamonjy fiangonana ny ao an-trano.
“Chasse aux étoiles”
Afaka atao tsara ihany koa ny mampilalao azy. Raha ity lalao iray ity izao dia maka ireo kitana fanaovana haingon’ny hazo noely ireny ny lehibe ary afenina manerana ny trano na ao anatiny io na any ivelany. Ny ankizy amin’izay avy eo no asaina mitady ilay kintana ary asaina ataony anaty harona kely ilay izy. Mba hampazoto ny ankizy dia asio fanomezana kely atolotra ho an’izay mahita betsaka ohatra.
Manamboatra mofomamy tsotra
Manana fotoana betsaka ijanonana ao an-trano ny ankizy rehefa fotoanan’ny noely. Afaka atao tsara arak’izany raha ho an’ny zaza efa afaka manao raharaha kely ny miaraka mikarakara mofomamy tso-tsotra ataon’izy ireo gouté. Ohatra hoe “pain d’épice”, na “sucettes” amin’ny chocolat,…
Mandeha mijery dadabe noely
Raha tsy afaka manao dadabe noely i dada dia manokana fotoana kely ary mamonjy ireny toeram-pilalaovana miavaka kely ireny miaraka amin’ny ankizy. Amin’ireny matetika dia misy dadabe noely foana ary misy kilalao maro izay afaka hilalaovan’ny ankizy.
Raha tsy mbola milamina sy mitombona tsara izay hatao amin’ny noely dia azo atao koa ny manao programa kely mitondra ny ankizy mivoaka kely miala ao an-trano. Mitondra sakafo, entina izay kilalao vao azony,…